Magaalada muqdisho oo habeenkii labaad oo xiriir ah howlgallo culus laga sameeyay maxaase kasoo baxay??? – Kismaayo24 News Agency
Magaalada muqdisho oo habeenkii labaad oo xiriir ah howlgallo culus laga sameeyay maxaase kasoo baxay???
by Tifaftiraha K24 7th May 2017 086
Taliska qeybta guud ee ciidanka booliska gobalka Benaadir ayaa howlgalo ka fuliyay isgoysyada magaalada Muqdisho iyo degmada kaxda ee gobalka Benaadir.
Ujeedada howgalkan ayaa waxuuu ahaa xaqiijinta amaanka caasimada iyo hanaanka ay u suganaan ciidamada amniga muqdisho.
Taliyaha qeybta Guud ee ciidanka Booliska, saraakiisha amaanka iyo gudoomiyaha Kaxda ayaa ku gaaf wareegay Wadooyinka Degmadaasi iyadoo ka sameyay howgal kooban ay ku xaqiininayen amaanka degmada.
Taliyaha Qeybta Galbeed ee ciidanka Booliska gobalka Benaadir Gaashanle Sare Maxamed Daahir Cabdule ayaa ka warbaxiyay amaanka qeybta Galbeed iyo sida ay iskula shaqeeyaan maamulka degmada iyo ciidamada amanaka.
“taliye ciidamada iyo degmooyinka si wanagsan aye u wada shaqeeyaan, waxaana sameynaa howgalo joogta ah, gudoomiyaha degmada kaxda waa shaqsi habeen iyo maalin u taagan xaqiijinta amaanka degmada si wanaagsan ayuuna noola shaqeyaa” ayii yiri
Gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobalaka Benaadir ayaa sheegay in talaabo wanaagsan oo lagu xaqiijin karo amaanka ay tahay in saraakiisha ciidamada amaanka ay habeen walbo kormeer ka wadaan degmooyinka gobaka Benaadir.
“Taliye waan kuu mahadceliayaa in xiligan aad nagu soo booqato degmada kaxda waxaa ay natusineysaa sida ay kaaga go”antahay sugida amniga gobalka” ayuu yiri gudoomiyaha Kaxda.
Ganeral Axmed Xasan Maalin taliyaha qeybta guud ee ciidaanka Booliska gobalka Benaadir ayaa tilmaamay in ay wadaan qorsheyaal ku aadan sugida amniga si loo xaqiijiyo amaanka gobalka.
“Habeen walbo ayaan wadnaa howgalkan habeen hore waxaan ka wadnay degmooyin kale oo gobalka Benaadir ah, caawana waxaan joognaa degmada kaxda taasi sababteeda waxey tahay sugida amaanka Muqdisho, Booliska iyo shacabka waa saxiib waxaana laga doonayaa in ay waa shaqeeyaan taasi waxey horseed ka noqan kartaa xaqiijinta amniga”ayuu yiri
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda oo sagootiyay Ergeyga Jaamacadda Carabta oo muddo xileedkiisa shaqo ay ……
Dhageyso: Ra’isul wasaare kheyre oo hal arin ka codsaday ganacsatada soomaliyeed xili uu la….
Dagaalamayaal ka tirsan Shabaab iyo Ciidamo ka tirsan kuwa Dowlad Deegaanka Soomaalida Ethiopia oo dagaal ku dhex maray………..
Tifaftiraha K24 6th April 2017
TOP NEWS: Alshabaab oo jawaab kulul u dirtay dowladda kenya kadib war shalay ka soo baxay kenya oo lagu sheegay in……
Tifaftiraha K24 22nd April 2017